ဒဏ်ရာပြတိုက်..........: ဗီးနပ်(စ်)ရဲ့ လက်တစ်စုံ..
ဘယ်သူကများကြိုသိနိုင်ခဲ့မှာတဲ့လဲ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လှပသော လက်ချောင်များမှာ မှော်ဆန်သော ဖျားယောင်းညှို့ငင်မှုတွေ ရှိနေတာကိုလေ။ ရှည်သွယ်သော လက်ချောင်းများ. ပန်းနုရောင် လက်သည်းရှည်ရှည်လေးတွေ.ရွှေဝါရောင် မွေးညှင်းနုနုလေးများနှင့် ဖြူလွလွ အရေပြားအောက်မှ ဖောက်မြင်နေရတဲ့ သွေးကြောမျှင်မျှင် စိမ်းစိမ်းတွေ၊ ထိုအရာတွေအားလုံးထက် စပယ်တစ်ပွင့်လို ဖြူဖွေးနူးညံ့သော လက်ဖ၀ါးပြင်၊ ထိုလက်ဖ၀ါးပြင်ထက်တွင် ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ် သေဆုံးခဲ့ဖူးပါရဲ့...။ လက်ချောင်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် လင်းမြသောအနုပညာတစ်ရပ် ပါဝင်နေသည်။ မီးခိုးငွေ့ဖြူဖြူတွေရဲ့ အနုပညာလို ဖမ်းဆုပ်ရခက်တဲ့ အနုပညာပေါ့..............
သူ့လက်ချောင်းများက အေးစက်သောနှင်းပွင့်တို့ကို နွေအဖြစ်နဲ့ ပွင့်စေတယ်။ လတစ်စင်းရဲ့ အခင်းအကျင်းနဲ့ပေမယ့် မီးလင်းဖိုလေးလို နွေးစေတယ်။ ကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးဆိုတိုင်း နဖူးပေါ်ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့ သူ့လက်ဖ၀ါးက လူတစ်ကိုယ်လုံးကို ပန်းတွေ တဟုန်းဟုန်းပွင့်စေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ ကျောက်ရုပ်ကို နူးညွှတ်စေတဲ့ အနုပညာမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်များ ခံနိုင်ရည်ရှိမှာတဲ့လဲ.။ ပျော့ညံ့တယ်ပဲဆိုဆို ကျွန်တော်မငိုပါရစေနဲ့...........
အိုကွယ် ဗီးနပ်(စ်)ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လက်တွေတဲ့လား..? ခွင့်လွတ်ပါ လက်ချောင်းလေးတို့ရယ်။ မင်းတို့လေးတွေက ဆူးကင်းတဲ့ နှင်းဆီပါ။ ဘယ်လိုပဲဆိုဆို မင်းတို့လေးတွေရဲ့ သွေးတိုးနှုန်းက ငါ့ဘ၀ကို အဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တယ်။ မင်းတို့တွေက ပန်းပွင့်စေတဲ့လက်တွေပါ။ ခက်တာက ငါကပန်းတစ်ပွင့် မဟုတ်ဘူးကွယ်..။ ငါက ဗုံးတစ်လုံး ...ခံစားချက်တွေကို ကြုံးရုံး သိုလှောင်ရာပေါ့။ ငါ့ကို မပွင့်လန်းစေချင်စမ်းပါနဲ့ကွယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငါလည်း နှင်းဆီသွေးနဲ့ နင့်လက်ကလေးကို မွှေးမြချင်တာပေါ့။ နင့်လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင် လောကကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြည့်ချင်တာပေါ့။ တကယ့်တကယ်မှာတော့ နင့်လက်ဖ၀ါးက လိပ်ပြာတွေ ကျက်စားဖို့သာပါ။ ဗုံးတစ်လုံးရဲ့ စနက်တံဖြုတ်ဖို့ နင့်လက်ချောင်းလေးတွေ အလုပ်မလုပ်သင့်ပါဘူးကွယ်။ လေကွယ်ရာမှာ ပန်းတို့နဲ့သာပျော်ပါတော့..။ လောကအတွက် သားချော့တေး နင့်လက်နဲ့ရေးပါ။ အဝေးကနေ ငါကြားပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မိခင်တိုင်း အဲဒီသားချော့တေးကို ဆိုကြတဲ့အခါ ဗုံးတစ်လုံးက ပန်းတွေ အတုန်းအရုန်းပွင့်တာ နင်မြင်ရလိမ့်ဦးမယ်...။
တကယ်တော့ သူ့လက်ချောင်းမှာ ပန်းပဲ ပွင့်ခွင့်ရတာပါ။ သူ့လက်ကလေးတွေဆိုတာ ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တစ်ခါ မက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ထက်မပိုခဲ့ပါဘူးလေ။ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်တိုင်း သူအားကိုးတကြီး ကိုင်ထားတတ်တာ ကျွန်တော့်လက်မှမဟုတ်တာ။ တပါးသူအတွက် တခါးပိတ်တတ်တဲ့လက်က ကျွန်တော့်အတွက် (ထွက်သွားဖို့) တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့လက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဖျားယောင်းတတ်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးပါသလား...?
လက်ချောင်းလေးတွေကိုမှ စွဲလမ်းခဲ့သော၊ လက်ဖ၀ါးလေးတွေရဲ့ နူးညံ့မှုအောက်မှာ ကျရှုံးခဲ့ရသော လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်ပေါ့။
“နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့.. ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မေ့မရတာပါလိမ့်...? ”
Posted by wai linn at 3:25 PM
လေကွယ်ရာမှာ ပန်းတို့နဲ့သာပျော်ပါတော့..။ လောကအတွက် သားချော့တေး နင့်လက်နဲ့ရေးပါ။ အဝေးကနေ ငါကြားပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မိခင်တိုင်း အဲဒီသားချော့တေးကို ဆိုကြတဲ့အခါ ဗုံးတစ်လုံးက ပန်းတွေ အတုန်းအရုန်းပွင့်တာ နင်မြင်ရလိမ့်ဦးမယ်.............
မင်းစာဖတ်ရတာလည်း လူကိုပျော့ပျောင်းပြီး နုံးသွားတာပဲ..
1/02/2010 4:00 PM
“အိုကွယ် ဗီးနပ်(စ်)ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လက်တွေတဲ့လား..?”....
Happy New Year............ပါနော်..
1/02/2010 4:57 PM
Happy New Year Dear Bro .....(sorry ..I am really busy yet tried my best to post new one yesterday, but cant visit and write comments to all of you....sorry...., try to respond coming Monday...) May all of your wishes come true ......:D
With Love/ Your Sis ..CKA
ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ တူတယ်။ တကယ် ကိုထိထိမိမိပဲ။
ကိုဝေလင်းရေ Happy New Year။
1/03/2010 10:04 AM
အလယ်အပိုဒ်လေးကတော့ နေရာချပြီး ရေးလိုက်ရင် မော်ဒန် ကဗျာလေး တပုဒ်လို ဖြစ်သွားမလားပဲ ။
စိတ်အာရုံမှာစွဲလန်းရင် နုညံ့တဲ့အထိအတွေ့မှ မဟုတ်ပါဘူး အရာရာကို မမေ့နိင်တာပဲလို့ထင်မိတယ်
ဝေလင်းရေ...ငါ့မောင်လေးကို ခုမှ လာနှုတ်ဆက်ရတော့တယ်...။ ငါ့မောင်လေး စာတွေက မြင့်တော့ အမက လိုက်မမီဘူးဟဲ့၊ အဖွာကြီးမှုတ်လား....:D
လက်တစ်စုံကိုတော့ ကြောက်မိပါရဲ့.... ဒီလောက် အင်အားပြင်းတာ...ခံစားသွားတယ် ညီရေ...
အဲ့ဒီလိုရေးနိုင်တာလေး...သဘောကျတယ်....။ စကားလုံးနိမိတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြောချင်တာကို ဖော်ပြသွားတယ်လို့ အစ်ကိုတော့ထင်မိတယ်...။ ခံစားသွားတယ်ညီလေးရေ...။
အဲ အရေးက မိုက်တယ်ဗျ
လင်း ဖြိုး said...
အလယ်က စာသားလေးက စိတ်ဝင်စားမှုတွေ
12/07/2015 12:08 PM